Pocket Resume Builder App- Professional CV Maker 1.0.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.7 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Application မ်ား စီးပြားေရး Pocket Resume Builder App- Professional CV Maker
Pocket Resume Builder App- Professional CV Maker ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အခမဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Builder App ကို မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
သင်၏နောက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသစ်က Pocket ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Builder App- Professional က CV ကိုဖန်ဆင်းသောသူနှင့်စတင်ပါ။ PDF ကိုကို formats အတွက်မေးလ်ပို့ပေး shared နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့်တဲ့ professional နဲ့အထင်ကြီးကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူယောဘကိုယှဉ်ပြိုင်။ ပြည်သူ့အမြဲကိုယ်ရေးရာဇဝင်အဆောက်အဦများအတွက်အမျိုးမျိုးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များ & apps များအဘို့ရှာကြသည်ဒါပေမဲ့သူတို့မဆိုအထင်ကြီးကိုယ်ရေးရာဇဝင်အဆောက်အဦ app ကိုမရနိုင်ပါ။ သင့်လက်၌ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ထားရှိခြင်းသည်မြင့်မားသောလစာအလုပ်ရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအခမဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဆောက် app ကိုသင်အကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုငါပေးမည်။ CV ကိုသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဆောက် app ကိုသင်သည်သင်၏ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သမျှအလုပ် tools များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်စံနှုန်းများပေးသည်, ဤကိုယ်ရေးရာဇဝင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုသို့အလုပ်အင်တာဗျူးကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည် Pocket ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Builder App- Professional က CV ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုစဉ်အမှားတွေကိုရှောင်ရှားရာသင့်ကိုယ်ပိုင် CV သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။
ရိုးရှင်းစွာမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်သင်၏လူအပေါင်းတို့ပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဖြည့် Start နှင့်ဤပြီးနောက် template ကိုရှေးခယျြ, ဒါကြောင့်ရွေးချယ်ရာတွင်ပြီးနောက်။ သငျသညျမျိုးစုံ profile များကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ တိုင်းပရိုဖိုင်း၌သငျမျိုးစုံကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများအတွက် profile များကိုနှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်ထို option ရှိသည်။ ဒါပဲ! သငျသညျယခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အိတ်ကပ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူအင်တာဗျူးကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး Professional ကယောဘကို Holder Be
အိတ်ကပ်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Builder CV ကိုအခမဲ့ဂျော့ကွဲပြားခြားနားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို formats ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖန်တီးသူ app ထဲမှာရရှိနိုင်ပါခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ထုတ်လုပ်တဲ့အခမဲ့ app ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သို့မဟုတ် CV ကိုရေးသားခြင်းအခမဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ထုတ်လုပ်သူ app ကိုနှင့်အတူအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြု! ရုံကိုယ်ရေးရာဇဝင်, CV ကိုဖန်တီး, ငါတို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖန်တီးသူ app ကို အသုံးပြု. PDF ဖိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းဖို့ပေးထားသောအာကာသအတွင်းဖြည့်ပါ။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita အသုံးပြုခြင်း, လွယ်ကူသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖန်တီးသူဒါ PDF ကို preview ကိုနဲ့အီးမေးလ်ခွဲဝေမှု option ကိုလည်းပါဝင်သည်, သင်သည်သင်၏ကိရိယာမှအီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ပိုလတ်ဆတ်ရဲ့ & အတွေ့အကြုံများအတွက်အခမဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် CV ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခမဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Builder App ကို။ အခမဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပုံစံဖြင့်စက္ကန့်အတွင်းကိုအကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖန်တီးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Builder နှင့် CV ကို Builder app ကို၏အကူအညီနှင့်အတူ, သငျသညျပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှာဖွေနေအခမဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖန်တီးရန်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Pocket Builder App- Professional က CV ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုအင်္ဂါရပ်များပြန်လည်စတင်မည်:
Cover Letter နှင့်အတူ * Professional ကကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဖန်ဆင်းရှင်
* Create နှင့်သွားလာရင်းကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ - အလုပ်များအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ပြီးပြည့်စုံ app ကို
အခမဲ့ CV ကိုစာအရေးအသားနှင့်အတူ * အခမဲ့အလုပ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ထုတ်လုပ်တဲ့
* အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အကောင်းဆုံးကဒီကိုယ်ရေးရာဇဝင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita နှင့်အတူ Go
* PDF ဖိုင်ရယူရန်အဖြစ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် Save သို့မဟုတ်ဝေမျှ
အကောင်းဆုံးကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖန်တီးရန်ခြေလှမ်းကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကူအညီနဲ့အားဖြင့် * အဆင့်
မိနစ် * Get အမြန်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
Pocket Resume Builder App- Professional CV Maker အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Pocket Resume Builder App- Professional CV Maker အား အခ်က္ျပပါ
samyeraqy စတိုး 1.9k 323.79k
Pocket Resume Builder App- Professional CV Maker ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Pocket Resume Builder App- Professional CV Maker အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Apps Style
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://appsstyle.net/privacy.html
လက်မှတ် SHA1: FF:42:88:0B:16:6A:53:B9:B7:5D:DE:7C:FF:5D:CD:80:94:0F:41:D8
ထုတ်လုပ်သူ (CN): appsstyle
အဖွဲ့အစည်း (O): appsstyle
Pocket Resume Builder App- Professional CV Maker APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ